Ciidamo ka socday Uganda oo dhameystay shaqadii ay ka hayeen howlgalka AMISOM… – Hagaag.com
Ciidamo ka socday Uganda oo dhameystay shaqadii ay ka hayeen howlgalka AMISOM…
Posted on 16 Abriil 2019 by Admin in National // 0 Comments
Lt. Gen. Tigabu Yilma Wondimhunegn, the AMISOM Force Commander pins a medal on a Ugandan soldier during a medal award ceremony for Ugandan soldiers serving under the African Union Mission in Somalia (AMISOM), who have completed their tour of duty in Somalia. The event took place in Mogadishu on 15 April 2019. AMISOM Photo / Ilyas Ahmed
Ciidamo ka socday Uganda oo Ilaalo ka ahaa xarumaha ugu muhimsan dalka sida Madaxtooyada, Baarlamaanka, Dekkeda Mogadishu, Garoonka Diyaaradaha Aadan Cade iyo meelo kale oo ka mid ah Mogadishu ayaa dhameystay shaqadooda halka sano ahayd ee ay ka hayeen howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
Saraakiil ka socda Howlgalka AMISOM ayaa munaasabad sagootin ah ugu sameeyay Magaalada Muqdisho,waxaana la guddoonsiiyay billado sharaf ay ku muteysteen howsha ay ka hayeen Soomaaliya.
Ciidamada Uganda ee dalka ka baxay ayaa sidoo kale ku sugnaa Gobolka Shabeellaha hoose sida, Balli-doogle, Afgooye, Laanta Buuro, Arbacow, iyo Carbiska.
Waxaa lagu soo beddelay Guuto kale oo la wareegtay dhamaan howlihii Ciidamada ka baxay Soomaaliya, kuwaas oo laftooda todobaadkii hore soo gaaray Magaalada Muqdisho.
Taliyaha CiidankaUganda ee Soomaaliya Michael Kabango, ayaa aad u bogaadiyay Ciidamadaas oo uu sheegay in ay howl wanaagsan ka qabteen Soomaaliya si wanaagsanna u guteen shaqadooda.
Taliyaha Guutada ka baxday Soomaaliya Col. Jackson Kayanja ayaa sheegay in Guulaha guutadiisa ay gaartay ay ka mid tahay qabsashada Degaanka Sabiid ee Gobolka Shabeellaha hoose, sidoo kalena ay ka hortageen Qaraxweyn oo ay Al-shabaab ku diyaariyeen degaankaas.